Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE oo maanta Gaadhi ugu deeqay Jaamacadda Burco | Somaliland.Org
Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE oo maanta Gaadhi ugu deeqay Jaamacadda Burco
April 27, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE ayaa maanta Gaadhi ku wareejiyay Jaamacadda Burco ee xarunta Gobolka Togdheer.
Munaasibaddii guddoonsiinta Gaadhigan ee Jaamacadda oo maanta lagu qabtay Xarunta dhexe ee Xisbigaas ee magaalada Hargeysa, ayaa wax aka qayb galay masuuliyin kala duwan oo ka kala socday Jaamacadda Burco iyo Xisbiga KULMIYE.
Munaasibaddaas dadkii ka hadlay wax aka mid ahaa Guddoomiye-xigeenka Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi oo ka waramay ujeedada guddoonsiinta Gaadhiga ee Jaamacadda Burco. “Hore ayaanu u ballan –qaadnay, markaa ballankaas ayaanu fulinaynay. Sida aanu ballankan u fulinay, ayaananu u fulin doonaa ballan-qaadyada kalena markaanu talada qabano.” Ayuu yidhi Muuse Biixi .
Guddoomiye-xigeenka KULMIYE oo ka hadlayay hadallo ka soo yeedhay masuuliyiin kala duwan oo Xisbiga UDUB ka tirsan, ayaa wuxuu yidhi, “Waxa xalay TV-ga dawladda ka hadlay Rag UDUB ah oo leh may ahayn inay komishanku wakhtigaa doorashada u qabtaan, qaar kalena Joornaallada ayay ku soo baxeen oo leh Komishanku way ku degdegeen ee waa inay wakhtiga dib u dhigaan. Waxaannu leenahay Annagu hadalladaas is-khilaafsan Ragga Madaxda ah hadalkooda ayuunbaannu raacaynaa.” Waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Madaxweynuhu kol haddii wakhtigu ka dhammaado oo uu ku meel-gaadh yahay awoodaha qaar maba laha. Madaxweynuhu haddii uu ku meel-gaadhyahay ma geli karo heshiisyo caalamiya, Wasiir ma bedali karo, midna ma magacaabi karo, waxyaabo bandanna oo kalena ma samayn karo. Madaxweyne Rayaalena laba sannadood iyo badh ka hor ayuu wakhtigiisu dhammaaday oo uu ku meelgaadh yahay. Meelin walba Wasiir buu magacaabaa, shaqada bilaaba iyaga oo aan Golaha Wakiilladana laga ansixin.” Ayuu yidhi Muuse.
Waxa sidoo kale masuuliyiintii halkaa ka hadlay ka mid ahaa Xildhibaan Maxamed X. Yuusuf (Waamo) oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha Wakiilada ee gobolka Togdheer laga soo doortay. Waxaanu sheegay in ay farxad u tahay in la fuliyo ballan-qaad hore loogu qaaday gobolkii laga soo doortay.
Waxa iyana halkaa weedho kala duwan ka jeediyay laba masuul oo ka socday Guddida Jaamacadda Burco oo iyana ka warbixiyay sida ay ugu faraxsan yihiin Gaadhiga uu Xisbiga KULMIYE ugu deeqay Jaamacaddooda, kaas oo ay guud ahaan Xisbiga KULMIYE iyo taageerayaashiisaba uga mahad-naqeen.
Previous Post“Tani doorasho qudha maahee waa badbaado Qaran in uu isbadel yimaado”Next PostUrurada Bulshada oo baaq u jeediyay Bulshada iyo Hay’adaha Qaranka	Blog